Ucebise abaqeqeshi abasafufusa ngokuziphatha uRadebe - Impempe
Ucebise abaqeqeshi abasafufusa ngokuziphatha uRadebe
Owayengukaputeni weBafana Bafana nosesebenzisana nabakwaBetway, uLucas Radebe usenxenxe abaqeqeshi abasafufusa ukuthi bangaciji abadlali ngokwenzeka enkundleni kuphela, kodwa babe nayisibonelo esihle nangaphandle.
URadebe ubekhuluma nabaqokelwe ukwenza izifundo zokuqeqesh zeSAFA D-Licence ezixhaswe ngabakwaBetway eMiddleburg eMpumalanga.
Ucacise indlela abaqeqeshi abangasiza ngayo ngokuthi babe ngamakhombandlela ngokuthi umuntu kumele aziphathe kanjani.
“Izifundo ezifana nalezi zakhelwe ukuhlomisa laba abazenzayo ukuze babe ngabaqeqeshi abangcono uma besenkundleni. Kodwa abantu abaningi abangakwazi wukuthi abaqeqeshi banendima enkulu kanjani emphakathini.
“Banamandla okuba yisibuko la abanye bebuka khona ukuthi kumele bahambe kanjani empilweni,” kusho uRhoo.
“Imiphakathi yethu ibhekene nezingqinamba eziningi, futhi ingxenye enkulu yazo idalwa wukugqoza kobuholi nabantu abayisibonelo esihle emphakathini.
“Ngobuqotho obutholakala ngokuba ngumqeqeshi njengokuziphatha kahle, ukugcina isikhathi, ukuba neqiniso nokusebenza kanzima, abaqeqeshi bangadlala indima enkulu emiphakathini yethu. Bangagcini nje ngokusebenza enkundleni,” kuchaza uRadebe.
Enanela inkulumo kaRadebe, omunye wabenza lezi zifundo zokuqeqesha, uThobeka Simelane uthe kubalulekile ukuba abaqeqeshi abasebancane bazifake enhliziyweni lezi zeluleko zikaRaddebe. UThobeka uthe unesifiso sokuqeqesha iqembu labesifazane esigabeni eikhokhelayo.
“Ngiyagqugquzeleka ngalamazwi kaLucas. Imiphakathi yethu ibhekene nezingqinamba eziningi. Thina singabaqeqeshi, sidinga ukusebenzisa izikhundla zethu ebholeni ukuvezela abantwana abasakhula isithombe esihle.
“Ubuqotho lobu akhulume ngabo akuyona into entsha kithi, futhi yingakho kumele sifake isandla sizame ukwenza isimo sibe ngcono emphakathini,” kusho uThobeka.
Previous Previous post: BUKA! Umhleli weMpempe uhlaziya ngokuqashwa kukaNtseki kwiChiefs
Next Next post: Ngabe kukhona aqonde ukukusho uWilliams ngesithombe egqoke imibala yePirates?